IIDRIVEWAYS ZANGOKU (IINGCAMANGO ZOYILO) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Iidriveways zangoku (Iingcamango zoyilo)
Kule galari yeendlela zangoku uya kufumana izinto ezahlukeneyo, uyilo kunye nemibono yokuphefumlelwa. Uyilo lwesiko lokuqhuba linokuqinisa ubuhle kunye nokuthintela isibheno sekhaya lakho. Le mifanekiso inezinto ezahlukeneyo zendlela yokuhamba, kunye nezinto zokubonisa ezinye zeentlobo zeendawo ezithandwayo namhlanje. Ezinye zeentlobo zezinto ezidumileyo ezisetyenziselwa ukuhambisa izindlu zangoku kungoku, i-asphalt, ikhonkrithi, igrabile, iipeyinti zezitena, isileyiti kunye nelitye lecobble. Uhlobo ngalunye lwezixhobo lunezinto ezilungileyo nezingalunganga eziza kuxoxwa ngezantsi.
Kumfanekiso ongentla kwe-cobblestone paver driveway ekhokelela kumasango esinyithi edlulileyo kunye neethango ezenziwe ngomhlaba kwindawo enkulu yokungena ekhaya. Iibhulorho zeCobblestone, ezaziwa nangokuthi ziibhloko zaseBelgian zenza ukhetho olukhulu lokuqhuba njengoko zinomtsalane, zigcinwa ziphantsi kwaye zihlala ixesha elide. ICobblestone iza ngemibala eyahlukeneyo. Ukuhla kweendawo ezihamba ngeendlela zokuhamba ngamatye anokubiza kakhulu kwaye azilungelanga ngokugqibeleleyo kunokwenza umngeni ukucoca ikhephu ukuba lisetyenziswa kwindawo enemozulu ebandayo.
Iingcamango zeKhonkrithi yokuHamba
Iingcamango zeGravel Driveway
Uyilo lwale mihla lweeDriveways zeVidiyo
Ikhaya langoku elineembono zedolophu, udonga lwamatye oluxineneyo, ucingo lwentsimbi olwenziweyo kunye nomgaqo ongalinganiyo wesikwere ohamba ngendlela ekhangeleka umangalisa kwaye umema. Ikhonkrithi inokuba yinto ekumila kuyo ixesha elide kakhulu. Nangona kunjalo, ikhonkrithi ibiza kakhulu ukuyifaka kune-asphalt kwaye inokuba nefuthe elibi kwimozulu ebanda kakhulu. Kuba ikhonkrithi isetyenziswa ngokubanzi zininzi iindlela ezahlukeneyo zokwenza ukubukeka kwayo, umbala kunye nomphezulu wokufumana uyilo olufunayo kwikhaya lakho.
Eli khaya lihombisayo lihle linomjikelo omangalisayo wesetyhula eneeparavers ezigutyungelwe ngumtyibilikisi ukuze zinike ukukhanya okuphezulu. Idrive isonga ujikeleze indawo enomtsalane yamanzi enemithombo emininzi kwaye ijikelezwe ngumyezo ochumileyo wetropiki kunye nendlela yokuhamba ekhokelela ekungeneni ngaphambili kwekhaya.
Eli khaya lokunethezeka liqukethe isitrato esihle sekhonkrithi ejikelezayo ejikeleza umthombo omkhulu ophakathi. Ukulungiswa komhlaba ojikeleze isetyhula yokuhamba ngomgaqo kunengca, izityalo zeentyatyambo, kunye namasundu akweleenjiko.
Ikhaya elaziwayo lendawo yokuhlala linendlela ejikelezayo ejikelezayo enezimvi ezingwevu kunye nekhonkrithi esongelene kwisiqithi esisembindini esineendonga ezincinci. Indlela yokuhamba ikwayila garaji engaphantsi komhlaba ecaleni.
Uyilo lwesiqhelo setyhula yokuhamba kusetyenziswa imibala eyahlukeneyo yezitena ezibekwe ngeefom zecala lekhonkrithi.
Le ndlela yokuhamba i-paver yomeleleyo inoyilo lwekhonkrithi oluthululweyo kunye neepavoda ezime ngendlela engaqhelekanga embindini. Uyilo olubangelwe lukhetho olunomtsalane kunye nenhle kwizindlu zale mihla.
Ikhaya langoku elineebhulukhwe ezimdaka zekhonkrithi kuyilo olungahleliwe lubukeka lukhulu kwaye lenza umtsalane wokuqala kubakhenkethi kweli khaya.
Uyilo lweendlela zokuhamba ngezitena kunye nomthi obekwe embindini. Umntu unokucinga nje ukuba umthi wawukhona ngaphambi kwendlu, kwaye umniniyo wawuthanda kakhulu bagqiba kwelokuba bakhe i-drive ejikeleze yona.
Iindlela zangoku zokuqhuba zihlala zisebenzisa iipeyinti zezitena. Le ndlu inezinto zokwakha i-stucco kunye neentsika zamatye kunye neendonga, kunye ne-bark eyadiweyo kunye neyitena. Le ndlu yangaphambili yanamhlanje kunye nokulungiswa komhlaba kuyamangalisa kwaye kuyathandeka kwaye izitena zihambelana kakuhle ne-aesthetics yangaphandle.
Eli khaya lanamhlanje lineendlela ezihamba ngokudibeneyo ezihambelana ngononophelo ukwenza umbono omangalisayo. Isanti igalelwa phakathi kwamatye ukubanceda ukuba bangashukumi kwaye okoko nje isiseko sakhiwe kakuhle iipavile azizukuhlala okanye zihambe ngenxa yengqele kunye nokunyibilikisa kwemozulu.
Olu lubomvu kunye namalahle egxina isitena sendlela esikhangeleka sihle njengoko sibetha indlela eya ekhaya. Ngezitena ezinqamlezileyo ezinobungakanani obungalinganiyo kulula ukufumana inkangeleko yeklasikhi kunye noyilo.
Izimvo zesipho seminyaka emi-2
Iwindows yezitena ezihamba phambili ekhokelela kwikhaya elingaselwandle.
Le slate tile driveway ijongeka imangalisa ngamatye asikwe ngokungaqhelekanga kunye nokudityaniswa kombala okunomdla. Isilayidi sinokutyibilika kwaye isenokungabi lolona khetho lufanelekileyo kwindawo enemvula eninzi okanye xa isetyenziswa kwindlela ethambekileyo.
Le ndlela yokuqhuba izitena yasekhaya ijongeka imangalisa ngeepateni zayo zokuhombisa zeesangqa ezijikeleziweyo ezahlulwe yimiphetho yesikwere. Ukuqhuba ngezitena ngokwesiko kunika isibheno esihle sokuthintela imeko yangoku kunye nesitayile.
Eli khaya lala maxesha linendlela ekhonkrithi kunye neyonke. Olu hlobo luhlala lubizwa ngokuba ngumdibaniso ocacileyo okoko iitshiphusi zamatye okanye igrabile zivelisiwe ngaphezulu kumphezulu. Ukugqitywa komtshayelo kuhlala kusetyenziswa kwindlela yokuyihambisa. Iidrayivu ezihlangeneyo zinomtsalane wamehlo, zomelele kwaye umntu unokongeza imibala eyahlukeneyo kunye noburhabaxa ukuze ujongeke.
Indlu yanamhlanje enekhonkrithi egudileyo egalelwe kwizikwere inceda ukubonelela nge-drainage kwaye ijongeka ngathi isitayile. Umda welitye elirhabaxa wahlula indlela eya engceni kwaye wonyusa ukubonakala kweyadi engaphambili.
Le khonkrithi kunye nengca yokuhamba ngengca yenza ipateni enomdla ngokuqinisekileyo eguqukayo entloko. Yiyo kuphela uyilo olubonisiweyo apho umntu anokucelwa ukuba 'ayichebe indlela.'
Le ndlela yokuhamba ikhonkrithi ikhokelela kwikhaya langoku kwaye ijikelezwe yiyadi yolondolozo olusezantsi enezityalo ezinganyangekiyo yimbalela.
Le ndlu inepateni yokuhamba yanamhlanje enekhonkrithi ejikeleze amatye amancinci amancinci. Uhlobo lwejiyometri luhamba ngokugqibeleleyo kunye nolwakhiwo lwangoku lwasekhaya.
Le ndlela yokuhamba yi-asphalt ekhokelela kwisilayiti ekhonkrithi. I-Asphalt driveways iyakhawuleza kwaye kulula ukuyifaka, ayibizi xa kuthelekiswa nezinye izinto. Nangona kunjalo, i-asphalt ifuna ukuphinda ithengiswe rhoqo emva kweminyaka emi-3 ukuya kwemi-5 kwaye ngenxa yokuba igravel ikhululekile isenokungabi yindawo efanelekileyo yokuwa kwekhephu.
Le ndlu inomtsalane yasemaphandleni eNgilane inegravel evulekileyo eyakhiwe ngamatye agreyini. Olu luyilo lwendlela yokuqhuba lixabiso eliphantsi kwaye lubonelela ngolondolozo olulula kwaye lunokuhlala ixesha elide.
Ukulahla igrabile kwindlela ekhaya. Ngaphambi kokuba usasaze igrabile ukwenza indlela enje ngale qiniseka ukuba ulungisa umhlaba. uya kufuna ukuqinisekisa ukuba unomphezulu onzima ngaphandle komhlaba. Ukongeza qinisekisa ukuba umphezulu wakho unamanzi awaneleyo kunye neefom ezisecaleni zokugcina igrabile zisasazeke ngaphandle.
Indawo eqingqiweyo yokuhamba ekhokelela kwindlu encinci yendlwana.
udibene njani no-michelle?
Eli khaya lala maxesha libonisa i-tar egobileyo kunye ne-chip driveway eneziqithi ezinengca kunye negadi entle eneentyatyambo. Itha kunye ne-chip driveways zakhiwe ikakhulu nge-asphalt kwifom yolwelo kunye nelitye. zinokungabizi mali ininzi ukufakela kunye nokubonelela ngobuninzi bemoto. Icala elisezantsi letar kunye ne-chip emva koko linokufuna ulondolozo ukuba uhlala kwindawo eneemfuno zokususa ikhephu. Ngaphandle koko banokufuna olunye ungqimba olongezwe emva kweminyaka esi-7 ukuya kweli-10 yokusetyenziswa. Olunye uhlobo olufana nale yindawo yokuqhekezwa kwegobolondo esebenzisa iziqwenga zeklamu, iscallop kunye neembatyisi ukwenza ukhetho olunobuhlobo ngakumbi.
Omnye umzekelo wendlu yanamhlanje ene tar kunye ne chip chip. Itha kunye ne-chip driveway ikhokelela kwigaraji ezimbini zeemoto kwaye yenye indlela ebalaseleyo yokuhamba ngendlela ye-asphalt.
Ndwendwela eli phepha ukubona okungakumbi iintlobo zeendlela zokuqhuba ekhaya.
herbergers umama womtshakazi unxiba
yimalini ukutshata enkundleni yamatyala
kwenzeka ntoni ekucebiseni ngomtshato
iilokhwe zomtshato ezimhlophe kunye negolide
Iindleko eziphakathi ngomtshato ngamnye weplate